(जसपा)ले कुन दललाई साथ दिन्नछ? कांग्रेस-माओवादी कि एमालेलाई ? – Khabar Patrika Np
(जसपा)ले कुन दललाई साथ दिन्नछ? कांग्रेस-माओवादी कि एमालेलाई ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र २८, २०७७ समय: ९:४६:१८
काठमाडौं । पछिल्लो सत्ता समीकरणमा निर्णयक देखिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले कुन दललाई साथ दिन्नछ भन्ने विषयले नेपालको राजनीतिलाई डोर्याउने भएको छ । जसपाले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको कारण वैकल्पिक सरकार बनाउने तयारीमा लागेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अलमलमा परेका छन्।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउन जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोलाई फकाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर ठाकुर र महतो ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने पक्षमा अझै देखिएका छैनन् ।
जसपाभित्रै उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने पहिलेदेखि नै ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । गएको शुक्रवार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसको निर्णयपछि माओवादी केन्द्र पनि उत्साहित भएको थियो ।
अस्ति कपिलवस्तुमा भएको कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब छिटै वैकल्पिक सरकार बन्ने बताएका थिए । जसपासँग सहमति गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने माओवादी केन्द्रको तयारी छ । तर जसपाले साथ दिने सङ्केत नदेखाएपछि माओवादी केन्द्र अलमलमा परेको छ । यही अलमलका कारण माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने सांसदको संख्या सुनिश्चितता नहुँदा कांग्रेस पनि अलमलमा छ ।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार गठन गर्न कांग्रेसलाई जसपाको साथ आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ सांसद रहेकामा दुई जना निलम्बनमा छन । माओवादी केन्द्रका ५३ र जसपाका ३३ सांसद छन् ।
नेकपा एमालेका १ सय २१ सांसद छन् । राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाका एक(एक जना सांसद छन् । कांग्रेसलाई गठबन्धनको सरकार बनाउन माओवादी केन्द्र र जसपा दुवै पार्टीको साथ चाहिन्छ । जसपाभित्र सत्ता समीकरणका विषयमा एकमत नहुँदासम्म वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना देखिँदैन । माओवादीले सरकारलाई गरिरहेको समर्थन फिर्ता लिएमा ओलीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ ।